Google Coach: Mpanampy amin'ny fanatanjahan-tena ao amin'ny Google Androidsis
Google dia te-hiloka be eo amin'ny tsenan'ny akanjo entina. Izany no antony niasan'ny marika amin'ny Wear OS, miaraka amin'ny anarany vaovao sy ny endriny. Ho fanampin'izay, antenaina ny handefa ny smartwatch azy manokana ny orinasa, saingy tsy izy irery no iasan'izy ireo. Satria ny orinasa dia miasa amin'ny azy io izao mpanampy manokana, antsoina hoe Google Coach.
Ho bebe kokoa noho ny mpanampy izay natokana hitahiry ireo angona fampiasan'ny mpampiasa. Saingy handeha lavitra kokoa ary cMety hanana fiasa izay ahafahan'ny mpampiasa manatsara ny fahasalamany sy ny asany ara-batana misaotra an'i Google Coach.
Toa, Google Coach dia hanana fahaizana manoro ny fanazaran-tena sy ny fanaony amin'ny mpampiasa. Ankoatry ny fanarahana ny lisitry ny zavatra rehetra ataony, miaraka amin'ny fampahalalana ilaina handrefesana ny fivoarany amin'ny fotoana rehetra. Hanatanteraka fanaraha-maso data sasany ihany koa izy ireo.
Ary koa, ho kely kokoa ny fampandrenesana. Raha tokony handefa fampandrenesana isaky ny mandeha ianao dia hisy fampandrenesana halefa any amin'ilay mpampiasa misy fampahalalana amin'ny lafiny maro samihafa. Amin'izay mba ny mpampiasa dia hanana sary manerantany ny toe-javatra misy azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Tena ilaina kokoa sy ahazoana aina.
Lojika, Andrasana ny fampidirana tsara eo amin'ny Wear OS sy Google Coach. Satria io mpanampy io dia ho eo amin'ny famantaranandro izay hampiasa ity rafitra fiasa ity. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra na efa hapetraka ho fenitra ao amin'izy ireo izany. Na dia mety izany aza no tadiavin'ny orinasa.
Tsy manana angon-drakitra momba ny daty fanombohan'ny Google Coach izahay. Mety ho rehefa manolotra ny famantaranandrony marani-tsaina ny orinasa dia hitranga izany. Tombantombana fa ho avy io famantaranandro io miaraka amin'ireo Pixel vaovao, saingy tsy misy ny fanamafisana momba azy. Manantena izahay fa hanana fampahalalana momba izany vetivety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Google dia miasa amin'ny mpanampy azy manokana
Kung Fu Z, na ny fomba hanavotana ny zanak'olombelona indray amin'ny apokalypsy zombie (tamin'ity indray mitoraka ity amin'ny daka)
Android 9.0 Pie dia hanana kinova Go ho an'ny ambany